steemit – Page3– @mmunited
My Entry for Share Your World contest #4
Image Source Tell us something about your people, your culture and your country that will cause us to want to visit your country. Don’t do the regular tourist attractions that we can Google. Tell us something special and unique. I would like to write about my people and my country. Myanmar people are very kind-hearted and …
dlike smt steemit steempress
ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ အသစ်ထွက်တဲ့ smt တွေအကြောင်းမရေးချင်တာနဲ့ week #1 တုန်းကရေးခဲ့တဲ့ Dlike အကြောင်း သတင်းကိုပဲတင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ သတင်းကတော့ Dlike နဲ့ SBI နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ Top Dlike user တွေကို SBI ရှယ်ယာတွေ ချီးမြှင့်သွားမယ်ဆိုတဲ့ သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ What is SteemBasicIncom? As per official steembasicincome blog: Steem Basic Income isasocial experiment to bringabasic income to as many Steemians as possible. Members join by sponsoring others …
I will also write this post in burmese language. ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်ပို့စ်ရဲ့ payout က 1.72 STU ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Week #3 ထက်စာရင်တော့ ပိုများလာပါတယ်။upvote ကများလာပြီးတော့ comment ကနည်းသွားပါတယ်။ @ptcmyanmar ဆီကနေ ၁၀၀ SP ရထားပါတယ်။ SBI ရှယ်ယာငါးခုရှိပါတယ်။ ဒီအပတ်မှာကတော့ @kiwibot,@cryptowithincin, @moonbot, @jumbot တွေဆီကနေ တစ်လစာ subscription service ရယူထားပါတယ်။ @minnowpowerup ဆီကနေ ၂၉ ရက် subscription service ရယူထားပါတယ်။ @inconboost နဲ့ @steemit builder ဆီကနေ lifetime service ယူထားပါတယ်။ @accelerator နဲ့ @steem-ua ဆီမှာ …
Introduction to SMT Week #2 – Air-Clinic
Air-clinic app ကို ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်ပတ်ထဲက စတင်ဖြန့်ချိခဲ့ပါတယ်။ အသုံးပြုသူတွေက အကောင်းဆုံး Dapp လို့ပြောပါတယ်။ အခုအချိန်မှာတော့ Steem blockchain နဲ့အပြည့်အဝပေါင်းစပ်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။ SMT တွေ စဖွင့်မည့်အချိန်ကို စောင့်ဖို့ပဲလိုပါတော့တယ်။ Imgae Source Air-clinic တိုကင်တွေကို “PROOF OF HEALTH’ algorithm နဲ့ဖြန့်ဝေပေးပါတယ်။ ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အချက်အလက်တွေကို ရေးတဲ့သူနဲ့ ဖတ်တဲ့သူတွေက တိုကင်တွေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ ပရောဂျက်ကို ပံ့ပိုးပေးတဲ့သူတွေလဲ ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ SMT testnet ကို January မှာ စဖွင့်လှစ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Steemit အသုံးပြုသူတွေအနေနဲ့ Steemconnect ကိုအသုံးပြုပြီး Login လုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ မိမိရဲ့ ကျမ်းမာရေးအခြေအနေတွေကို ပိုစ့်တင်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ မိမိရဲ့ ကျမ်းမာရေး ရည်မှန်းချက်တွေကို မျှဝေလို့ရမှာဖြစ်ပြီး မိမိရဲ့ကျမ်းမာရေး …